VPN Bilaash ah ee ugufiican Mac (2020) - Si fudud loo dejiyo & loo isticmaalo - Vpn
VPN Bilaash ah ee ugufiican Mac (2020) - Si fudud loo dejiyo & loo isticmaalo
Weli, xisaabinta midkee ugu fiican VPNs bilaash ah ee loogu talagalay Mac?Hagaag, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino.
VPNs waa qalab aad u fiican oo xogtaada ku badbaadin kara adduunkan internetka. Waa inaad ka fekereysaa sababta aan ugu baahanahay VPN si aan u ilaaliyo nabadgelyada haddii aan horey u leeyahay antivirus ku rakiban Mac-keyga. Waxyaabaha ayaa ah, VPNs waxay ku darayaan lakab dheeri ah oo nabadgelyo ah markaad internetka ka baarayso. Iyo VPNs ma aha oo kaliya taas, laakiin waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad ka hesho waxyaabaha la xannibo oo la xakameynayo ee ka yimaada meel kasta oo adduunka ah xitaa waxay kaa caawinayaan inaad xannibto xayeysiisyada aan loo baahnayn iyo pop-up.
Maanta, waxaan ku siin doonnaa xulashadeena ugu sareysa ee VPN-yada Bilaashka ah ee Mac-gaaga. Aan dhex galno.
Maxaan U Isticmaalnaa VPN-yada Bilaashka ah?
Waxyaabaha leh VPNs bilaash ah ayaa ah in kasta oo aad si bilaash ah u hesho adeegga, way xaddidan tahay oo ma aha calaamadda qorshayaasha caymiska. Laakiin waxaan aaminsanahay in wax la haysto ay ka wanaagsan tahay wax la'aan. Marka, waxaan hubinay inaad heshay VPN-yada bilaashka ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay Mac-gaaga.
Raadinta Adeegyada VPN ee Sugan? Hubi 10ka Adeeg ee ugu Fiican VPN ka soo qaad qaybtayada blog-ka.
Liistada VPN-yada Bilaashka ah ee ugu Fiican Mac:
1. Express VPN - Maya # 1 VPN oo aad heli karto
Kani waa # 1 VPN ee aad ugu heli karto Mac-kaaga bilaash. In kasta oo aad ubaahantahay inaad lacag sameyso kahor intaadan helin adeegooda waxaa jira qabasho, maadaama ay bixiyaan a 30 maalmood soo celinta siyaasadda , waad ka bixi kartaa rukunkaaga 30 maalmood gudahood adoo lacagtaada oo buuxa dib kuugu soo celin kara. Waxaa loo heli karaa Big Sur (11), Catalina (10.15), Mojave (10.14) & High Sierra (10.13), X Yosemite (10.10) & X El Capitan (10.11).
OS-ga oo ay weheliso, waxay ku shaqaysaa dhammaan noocyada Macbooks iyo iMac halkaas. Waxaad ku dejin kartaa seddex talaabo oo fudud oo keliya oo waxaad ku raaxeysan kartaa internetka boggaga safari oo leh nabadgelyo dheeraad ah.
Markaad adigu bixiso adeegga kahor, waxaad helaysaa dhammaan astaamaha la furay iyada oo aan xadidnayn.
Waxaad kahelaysaa Servers 160 goobood oo aduunka ah kanahadlaya 94 wadan.
Server Filaayo in xawaaraha sare.
Kala qaybinta qaybta tunnel-ka taas oo kuu oggolaanaysa inaad doorato waxyaabaha ka koobnaan doona iyo kaas oo ku xirnaan doona xiriir joogto ah.
Muuqaalka Isbeddelka Dilka Shabakadda kaas oo hubiya in taraafikadaadu xanniban tahay haddii shabakadda wakiilku ay go'antahay.
Ku xir ilaa 5 aalad markiiba.
Haddii aad rabto inaad iibsato adeegyadooda caymiska tijaabada bilaashka ah ka dib. Waa kuwan qorshayaasha ay bixiyaan
Qorshaha hal bil: Waxay ku dallacaysaa $ 12.95 (5 955.44).
Qorshe lix bilood ah:Waxay biilasha ku bixineysaa $ 9.99 (₹ 737.10) bishii & $ 59.95 (₹ 4423.44) wadar ahaan lix bilood.
Shan iyo toban bilood qorshe: Waxay biilaysaa $ 6.67 (₹ 492.23) bishii & $ 99.95 (₹ 7375.36) muddada shan iyo tobanka bilood ah.
Dhammaan qorshayaashani waxay leeyihiin dammaanad-celin 30 maalmood ah.
2. NordVPN - Guud ahaan ugufiican Mac
Bixiyaha shabakadan wakiil ee ku saleysan Panama waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aad ku heli karto Mac-kaaga si bilaash ah. Waxay sidoo kale leeyihiin qorshaha 30 maalmood oo lacag celin ah si aad uhesho dhammaan astaamahooda qiimaha iyadoon wax xaddidaad ah la haynin 30 maalmood oo laga baxo diiwaangelintooda ka hor inta aan la gaarin calaamadda bisha.
NordVPN waa guud ahaan VPN ugu fiican ee loogu talagalay MacOS, isdhexgalkiisu wuu ka nadiifsan yahay kana sahlan yahay ExpressVPN. Xitaa waxay bixiyaan adeegyo la been abuuray, adeegeyaashani waa wax kale oo aan ahayn server kale oo loo isticmaali karo si gaar ah si loo helo VPN halkaas oo xaddidaadda adeegsiga noocaas ahi culus tahay. Waxaad sidoo kale u wareegi kartaa inta u dhexeysa borotokoolka sida TCP / UDP iyadoo ku xiran doorbidkaaga xawaaraha iyo kalsoonida.
Adigoo horay u bixinaya, isticmaaluhu wuu furi karaa dhammaan astaamaha uu isticmaaleha adeeggu heli karo. Aynu eegno qaar ka mid ah.
waxaad ka dooran kartaa in ka badan 5400 server oo ku yaal agagaarka 59 dal.
Habka sirta ah ee 'Inhouse NordLynx' oo xogtaada aad u ilaaliya.
Dhowr boqol oo server P2P ah oo kuu oggolaanaya inaad si fudud oo badbaado leh u wadaagto feylal waaweyn oo waaweyn.
Ma jiro xadka xadka loo yaqaan 'Bandwidth', waxaad ku raaxeysan kartaa internetkaaga xawaaraha sare leh adiga oo aan wax xiiq ah lahayn.
Ku xir ilaa 6 aalad markiiba.
Waxaad ka eegi kartaa liiska buuxa ee astaamaha MacOS NordVPN halkan
NordVPN waxay bixisaa seddex qorshe haddii aad rabto inaad iibsato adeegooda caymiska.
qorshaha hal bilWaxay ku biireysaa $ 11.95 (₹ 883)
Qorshaha Sannadlaha ah:Waxay ku biireysaa $ 4.92 (₹ 364) bishii.
Qorshaha Sanadka Lamaanaha:Waxay ku biireysaa $ 3.71 (₹ @ 274) bishiiba.
Dhammaan qorshayaasha ay bixiyaan NordVPN waxay la yimaadaan dammaanad-celin 30-maalmood ah.
3. Hotspot Shield VPN - Waxaa lagu aaminay Xawaare Xawaare
Nooca tijaabada ah ee bilaashka ah ee gaashaanka Hotspot, oo ka duwan NordVPN iyo ExpressVPN, waxaa lagu tijaabin karaa bilaash; maahan inaad horay usiiso lacag bixinta. Laakiin cillad-darrada tan ayaa ah inaad hesho astaamo xaddidan. Waxaa sidoo kale jira qabasho midkaan sidoo kale, waxay kaloo bixiyaan 45 maalmood oo ah qorshe dammaanad-celin lacageed ah, haddii aad rabto inaad hesho dhammaan sifooyinka qaddarinta iyadoo aan wax xaddidaad ah lahayn, waxaad iibsan kartaa mid ka mid ah qorshayaashooda caymiska ka dibna iska-dhaaf kahor 45 maalmood calaamadee.
Hotspot Shield wuxuu sheeganayaa inuu yahay adeegga VPN ee adduunka ugu dhaqsaha badan. Waxaan gudubnay hubinta sheegashadan waana tan aan helnay: Iyadoo tikniyoolajiyadda 'catspult hydra' ee Hotspot Shield, waxay ku guuleysatay inay hesho 26.2% koror xawaaraha soo dejinta halka kuwa kale ee VPNs ugu yaraan ay hoos ugu dhaceen 42.5%. Taasi waa runtii dhakhso!
Waxaan ku liis garaynaynaa sifooyinka nooca gebi ahaanba bilaashka ah hoosta.
Internet xawaarihiisu sarreeyo illaa 500 Mbs maalin kasta.
Wuxuu adeegsan karaa server ku saleysan Mareykanka oo leh xawaare lagu kalsoonaan karo
Sirta heerka-milateri ayaa xannibaysa in ka badan 50 milyan oo khayaano iyo bogag ah phishing maalin kasta.
Borotokoolka lahaanshaha ee loo yaqaan 'Hydra', oo ay xaqiijiyeen khabiiro hogaaminaya sida ugu dhaqsaha badan uguna amniga badan.
Haddii aad u maleyneyso inaad u baahan tahay inaad u tagto nooca ugu sarreeya ee Hotspot Shield, waa kuwan qorsheyaasha aad ka dooran karto.
Qorshaha Lacagta:Haddii aad iibsato xirmada sanadlaha ah ee qorshahan, markaa waxaad kuheleysaa $ 71.88. Haddii aad iibsanayso oo keliya hal bil, ka dibna waxaad ku helaysaa $ 12.99.
Qorshaha Qoyska ee Lacagta:Haddii aad iibsato xirmada sanadlaha ah ee qorshahan, markaa waxaad kuheleysaa $ 143.88. Haddii aad iibsanayso kaliya hal bil, markaa waxay kugu kacaysaa $ 19.99.
Labada qorsheba waxay la yimaadeen dammaanad-celin 45-maalmood ah.
4. Qari.Me - 10GB Bil Walba
Hide.me VPN wuxuu ku siinayaa adeeg 10 Gigabytes bil kasta qorshahooda bilaashka ah halkaas oo aad ka dooran karto adeegaha meelaha sida USA, Canada, Netherlands, iyo Singapore. Logs lama hayo nooca bilaashka ah, dalabkuna ma laha xayeysiis sida kiiska noocyada tijaabada ee bilaashka ah qaarkood.
Xadka xaddiga xogta ee 10 GB runtii waa tallaabo weyn, waa tan ugu badan ee nooc kasta oo tijaabo ah oo bilaash ah uu bixiyo. Waa wax inaga dhigay inaan ku darno Hide.me liiskan. Halkaas kuma joogsato oo keliya, iyada oo nooca bilaashka ah, waxaad heleysaa encryption-ka darajada ugu sarreysa ee darajada Milatariga oo ay weheliso astaamaha daadinta IP-ga taas oo mar labaad ah bixinta weyn oo leh nooc bilaash ah.
Hide.me waa inuu ku siiyaa waxyaabo aad u wanaagsan inta lagu jiro isticmaalkaaga bilaashka ah, aan eegno qaar ka mid ah furayaasha
Waxaad heli doontaa 10 GBs oo ah xaddiga isticmaalka bil kasta. Taas oo ku filan in la sii daayo qaar ka mid ah Mawduuca Qeexitaanka Sare oo soo dejiya daadka.
Waxaad ka dooran kartaa server 5 meelood oo kala duwan oo adduunka ah. (USA, Netherlands, Canada, Singapore)
Sirta heerka militariga ee taraafikadaada. Ie. Qarsoodi AES-256. Aad u ammaan badan.
Waxay sidoo kale bixisaa ilaalinta daadinta IP.
Qaybta kala goynta tunnel, taas oo aad muhiim u ah inta hawl badan.
Marka ay timaado iibsiga qiimaha, Hide.me wuxuu bixiyaa seddex qorshe.
Qorshe hal bil ah:biilasha $ 12.95
Qorshe lix bilood ah: biilasha $ 4.99 bishiiba (62% keyd)
Qorshaha Hal Sano:lagu soo dallaco $ 3.32 bil kasta (74% keyd)
Dhamaan qorshayaashan waxay la yimaadaan 30 maalmood oo lacag celin ah.
5. Tunnelbear VPN - Wey u fiicantahay bilowga
Haddii aad ku cusub tahay muuqaalka VPN, tani waa VPN adiga. Waa super user saaxiibtinimo oo qabata shaqada aasaasiga ah. Iyadoo 500mbs oo xog ah bil kasta, ma ahan tan ugu fiican ee loo isticmaalo hawlo waaweyn, laakiin waxay u qabataa shaqooyinka yar yar si hufan oo aad u fudud. Uma baahnid inaad noqotid geek si aad u isticmaasho astaamaheeda.
Tunnelbear waa mid hufan oo ku saabsan amnigooda taas oo ay si macno leh u daabacaan xisaabtankooda Amniga oo si madax-bannaan loo sameeyo. Waxaad iska hubin kartaa isla halkan .Waxaad u baahan doontaa inaad gacanta ku habeysato Tunnelbear in kastoo ay tahay sababta oo ah inay iyadu keligeed gacanta ku qaabeyso Linux.
Qaar ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee aad ku heli doonto nooca bilaashka ah ee tunnelbear waa.
500 MBs isticmaalka xogta bil kasta.
xorriyadda doorashada server-yada ilaa 23 dal. (UK, USA, Canada, Jarmalka, Japan iwm)
A encryption-ka AES-256 ayaa aad amaan u ah.
Adeegyada caalamiga ah ee la hagaajiyay (laakiin kaliya ilaa 500MBs)
Dila aaladda beddelka si aad u ilaaliso xogtaada haddii adeegga VPN uu hoos u dhaco.
Tunnelbear waxay bixisaa 2 qorshe oo ah qiimeyn heer sare ah.
Qorshe aan xadidnayn:kaas oo biilasha ah $ 3.33 bishiiba.
Kooxo qorshe:kaas oo biilasha ah $ 5.75 bishiiba.
Tunnelbear ma bixiso dammaanad lacag-celin ah.
1Q. Miyaan ku isticmaalaa VPN-ka Macgeyga?
Sanadaha:Xaqiiqdii waa inaad isticmaashaa VPN. Sababta Sababtoo ah waxay ku dareysaa lakab dheeri ah amnigaaga waxayna kaa caawineysaa inaad ku badbaado jawiga internetka. Waa inaad hubisaa in VPN-ka aad isticmaaleyso uu yahay mid sumcad leh oo laga soo dejiyey websaydhka rasmiga ah. Haddii aad u tagto VPN raqiis ah ama casriyeysan, markaa waxay sameyn kartaa waxyeello ka badan tan u wanaagsan asturnaantaada.
2Q. Apple ma ku talinaysaa VPN?
Sanadaha:In kasta oo Apple ay bog gaar ah ku leedahay degelkeeda VPN-yada, ma suuq geyso mana joojinayso adeegsadayaasheeda inay adeegsadaan VPN. Waxaad ka akhrisan kartaa waxa ku saabsan halkan .
3Q. Ma la i raadsan karaa haddii aan isticmaalo VPN?
Sanadaha:Maya, laguma soo raaci karo mar haddii aad ku xiran tahay VPN, cinwaankaaga IP-ga ayaa lagu qariyaa adeegga, haddii qofna isku dayo inuu ku raadsado, waxay arki doonaan cinwaanka IP-ga ee VPN ee ma aha kanaga.
4Q. Ammaan ma tahay in la isticmaalo VPN marka la sameynayo bangiyada internetka?
Sanadaha:Haa, waa ammaan in la isticmaalo adeegga VPN inta aad bangiyada ka samaynayso khadka tooska ah, waxay ku siinaysaa lakab dheeraad ah oo ilaalin ah waxayna kaa ilaalinaysaa xatooyada internetka. VPN fiican xitaa ma hayn doono diiwaankaaga xogta, markaa uma baahnid inaad ka walwasho macluumaadkaaga qaaliga ah ee la xado & la iibiyo.
VPNs waa aalad aad u wanaagsan oo loo hayo amnigaaga iyo asturnaantaada. Inta badan VPN-yada bilaashka ahi waxay ku fiican yihiin warqad runtiina uma shaqeeyaan sidii ay ku andacoodaan markay timaado isticmaalka wax ku oolka ah, laakiin VPN-yadan aan ku soo xusnay xulashooyinkayagu waa kuwo gebi ahaanba lagu kalsoon yahay oo dhab ah. In kasta oo aadan ku heli doonin dhammaan astaamaha noocyada Bilaashka ah ee qaar ka mid ah, laakiin wax kasta oo adeeg xaddidan leh oo ay bixin doonaan, waxay noqon doontaa mid sharci ah.
Xulo midka adiga kuu shaqeynaya oo amaan iyo badbaado ku leh khadka tooska ah.
Daawo Netflix adoo adeegsanaya ExpressVPN
Sidee Loo Daawadaa Hotstar ee USA?
Sidee loo dejiyaa Xbox adoo adeegsanaya Telefoonka aka.ms/xboxsetup?
daawato wax free movie aan degsado saxiixin
sida loo isticmaalo audio in roblox
dhan baxay dhacdo 1 gogoanime
sida loo helo tvga shaashadda ee bilaashka ah
sidee baan u samayn heli amazon Ra'iisul for free